” အဟ အဟ အဟက် အဟက် အဟီး အဟီး……….” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ” အဟ အဟ အဟက် အဟက် အဟီး အဟီး……….”
” အဟ အဟ အဟက် အဟက် အဟီး အဟီး……….”
Posted by ခင်ခ on Jan 14, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 35 comments
တောင်တွေး မြောက်တွေး ဟိုရေး ဒီရေး နဲ့ ခင်ခ။
” အဟ အဟ အဟက် အဟက် အဟီး အဟီး အဟ အဟ အဟက် အဟက် အဟီး အဟီး ဟီးးးးးးးးးးးးး”
မန္တလေးဆောင်းတွင်းမနက်ခပ်ချမ်းချမ်းမှာ မနက် ၆ နာရီလောက်ဆိုပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ဟာမိုးမလင်းသေးတဲ့ အချိန် လူသူတိတ်ဆိတ် အိပ်ကောင်းနေတုန်း ဘယ်အိမ်က ကလေးများ စောစောစီးစီးထပြီး အားရပါးရ ရယ်မောနေသံက ရပ်တန့်မသွားဟဲ တအားကိုသဘောကျရယ်နေသံကြောင့် ကျုပ်တစ်ယောက်အိပ်ယာထဲ မှေးနေတဲ့မျက်လုံးဖွင့်ပြီး အသံလာရာကိုနားစွင့်မိလိုက်တော့ အိမ်ရှေ့နှစ်ထပ်အိမ်ဘက်ကလာတဲ့ အသံ ဆိုတာ လဲသိလိုက်ရော မှေးနေတဲ့မျက်လုံးတောင် ကျယ်သွားသလိုဖြစ်မိသွားတယ်လေ။
အကြောင်းကဒီလိုဗျ ကျုပ်တို့အိမ်ရှေ့တည့်တည့်မှာ နှစ်ထပ်အိမ်လေးရှိပြီး သော့ပိတ်ထားတာအတော်ကြာ ခဲ့ကာ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေကမှ နေမယ့်သူတွေပြောင်းလာတာလေ အဲဒီပြောင်းလာတဲ့ သူတွေအကြောင်းကို ကျုပ် အလုပ်ကပြန်လာတော့ သမီးဖြစ်သူက စပ်စုထားသမျှဖောက်သည်ချခဲ့တာက
” ဖေကြီး သမီးတို့ အိမ်ရှေ့ကနှစ်ထပ်အိမ်ကို နေ့ခင်းက လူတွေပြောင်းလာတယ်”
“ဟုတ်လားသမီး သမီးတို့အရွယ် ကလေးတွေရော ပါသလားလို့ သမီးစပ်စုပြီးပလား”
“သမီးတို့အရွယ်ကလေးတွေတော့မပါဘူး အဖွားကြီးတစ်ယောက်နဲ့ အဒေါ်အရွယ် အမျိုးသမီးနှစ်ယောက် ဘဲပြောင်းလာတာတွေ့တယ်”
“အေးလေ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် လမ်းထဲလူပြောင်းလာတယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်စည်ကားလာတာပေါ့ သမီးရယ်”
“သြော်ဒါနဲ့ဖေကြီး အဲဒီ အဒေါ်ကြီးနှစ်ယောက်က အပျိုကြီးတွေတဲ့”
အဲဒီလို ပြောထားခဲ့တာကြောင့် အပျိုကြီးတွေနေတဲ့အိမ်က ဘယ်နဲ့ကြောင့် ကလေးရယ်မောသံကြားရပါလိမ့် ဆိုပြီးတွေးနေမိသပေါ့ဗျာ။
အဲ နောက်တစ်ခုက ဟိုတစ်နေ့က တိုင်းရုံးမှာ အစည်းဝေးလေးရှိလို့ သွားတက်ပါတယ် အစည်းဝေး သဘာပတိနေရာယူပြီး သိပ်မကြာဘူး နိုင်ငံတော်သီချင်းတီးလုံးသံ ထွက်လာလို့ ကျုပ်ဖြင့်ထိုင်နေရာက ကမန်းကတန်းထရမလိုဖြစ်ပြီးမှ ဘေးဝဲယာကြည့်မိလို့တော်သေးတာပေါ့ ဒီပြင်ဆို ကျုပ်တစ်ယောက်ထဲ ယောင်ချာချာမတ်တပ်ရပ်သလိုဖြစ်အုံးမှာလေ။
တစ်ခါကလည်း ရန်ကုန်ကို အဝေးပြေးကားနဲ့ ညဖက်စီးနင်းခရီးထွက်ခဲ့တာ ညဉ့်နက်ချိန်ဆိုတော့ ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ ခရီးသည်တွေလည်း အိပ်မောကျနေတုန်း ကားနောက်ဖက်ကနေ ကယ်ကြပါအုံးရှင် ကယ်ကြပါအုံးရှင် ဆိုပြီးအသံထွက်လာလို့ ခုနအိပ်မောကျနေတဲ့ခရီးသည်တွေအကုန်လုံး ရုတ်ရုတ်သဲသဲနဲ့ ဘာများဖြစ်လဲ လန့်ကာနိုးကုန်ကြတာပေါ့။
တစ်ခါကြုံခဲ့တာလေးတစ်ခုက အလှုမင်္ဂလာပွဲတစ်ခုမှာ ဘုန်းတော်ကြီးက ရေစက်ချတရားဟောနေတုန်း ကိုကိုဖုန်းလာတယ် ကိုကိုဖုန်းလာတယ် ကိုကိုဖုန်းလာတယ် ဘာမှန်းလဲမသိဘူး ခေါ်မကြား အော်မကြား နဲ့ဆိုပြီးအသံထွက်လာလို့ တရားနာသူတွေနဲ့ ဘုန်တော်ကြီးမှာ ဆက်ဘဲတရားစာဆက်ရွတ်ရမလို ရပ်ရမလို ဖြစ်ခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာ။
စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှ နေလည်စာ စားနေတုန်းကတော့ မီးသတ်ဥသြဆွဲသံလို ထမြည်တာကြားရတာမို့ စားလက်စသူတွေ ထပြေးရမလိုဖြစ်ကြတာလဲ ကြုံရပါသဗျို့။
အခုဆိုမြန်မာပြည်လည်း မြို့နေသူတိုင်းနီးပါး ဟန်းဖုန်းလေးတွေကိုင်ဆောင်ကာ ပြောကြဆိုကြလုပ်ကြပါပြီ၊ အတော်လည်းခေတ်မှီလာပြီလို့ဆိုရမှာပေါ့ဗျာ။ ဟန်းဆက်တွေကလည်း အမျိုးစုံ ဖန်ရှင်တွေကလည်း လိုက်မှီ အောင်ကို နည်းပညာအစုံဆိုတော့ ဟန်းဖုန်းဖုန်းမြည်သံကိုက အမျိုးမျိုးအဖုန်ဖုန်ပေါ့လေ။ အဲဒီမှာ လက်ကိုင် ဖုန်းမြည်တဲ့ အသံကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးထားကြတာ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့် လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုသော်ငြား လည်း အဲဒီ လက်ကိုင်ဖုန်းကို အစည်းဝေးခန်းမတွေ ခရီးသွားကားတွေ လေဆိပ် ကားဂိတ် ဈေး ကျောင်းစတဲ့ လူအများစုဝေး ရာနေရာတွေကို သယ်ယူသွားလာကြမှာကတော့ မလွဲဧကန်ဖြစ်မှာပါ။ တစ်ကြိမ်မဟုတ်ကြုံဆုံ နိုင်မှာမို့ အများပြည်သူ အထိန့်အလန့်ဖြစ်စေမယ့်အသံလိုမျိုးတွေ ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ထိုအသံဟာ သင့်လျှော်၏ မလျှော်၏ တွေးဆကာစဉ်စားပြီး ဖုန်းလာရင်မြည်တဲ့(Ringtone)များကို ထားကြမည် ဆိုရင်ပိုကောင်းလေမလား တွေးလာမိတာပါဘဲဗျာ။ အခုတော့ ကြည့်ပါအုံး အပျိုကြီးတွေနေတဲ့အိမ်က ဖုန်းမြည် သံက ကလေးငယ်တစ်ယောက် အားရပါးရရယ်မောလိုက်တဲ့…………
” အဟ အဟ အဟက် အဟက် အဟီး အဟီး အဟ အဟ အဟက် အဟက် အဟီး အဟီး ဟီးးးးးးးးးးးး”
Excuse me Boss, you haveatext message…..
“ကိုကိုရေ ဒီမှာ ဖုန်းလာနေတယ်…
ကိုကိုရေ ဒီမှာ ဖုန်းလာနေတယ်…ဆိုမှ…
ဘယ်ကဟာမတွေနဲ့ အလေလိုက် သဝေထိုးနေတာလဲ…”
ဟီး… လှည့်ကြည့်မိတော့ လေသွားတယ်…
ကိုယ်တော်တစ်ပါးရဲ့ ခါးကြားက မြည်နေတာလေ…
ဒါကြောင့်လည်းရှေးစာဆိုထားခဲ့တာနေမှာ ဒူးနေရာဒူး တော်နေရာတော်……လို့လေ။
ဦးကျောက် ကော်မန့် ဖတ်ပြီး တစ်ကယ်ကို အောင်မလေး တမိတယ်
အရင် ဖုန်းတွေတုန်းကတော့ လူတစ်ယောက် ရင်းတုန်း တစ်မျိုးစီထားတာပဲ။
ရုံးက ဖုန်းဆိုရင် Drive myself crazy တို့ဘာတို့ လိုမျိုးပေါ့။
ဒါဆိုဒေါ်KZ ရဲ့ ဖုန်းက သံစုံတီးဝိုင်းပေါ့နော်။ လူတစ်ယောက် ရင်းတုန်း တစ်မျိုးဆိုတော့…..
CEO ကြီးနဲ့ ဒါရိုက်တာမမဆီက ဖုန်းဆိုရင် you got the fire သီချင်း …
ရုံးကဆိုရင် heart breaker သီချင်း..ဖြူဖွေးဆီကဆို This girl is on fire ဆိုပြီး အယ်လီရှာကီးရဲ့ အာခေါင်ခြစ်အော်တဲ့အသံနဲ့ Girl on fire သီချင်း …အာဟိ
အနော်ကတော့ ဂီတကို မြတ်နိုးသူပီပီ Guitar သံ နဲ့ Piano သံကိုပဲ ထည့်ထားတယ်ဂျ။ သို့ပေသိ အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာ ဥပမာ- ရုပ်ရှင်ရုံတို့ ဆေးရုံတို့မှာ ဆိုရင် Silent လုပ်ထားပါကြောင်း
အချိန်အတော်များများမှာ ဖုန်းကို vibrate ပဲ ထားဖြစ်ပါသဗျ။
ဖုန်းနဲ့ ဝေးနေမှသာ အသံထည့်ထားတာ
တစ်ခါတစ်လေ ဖုန်းလာတာတောင် မသိဘူးရယ်။
သို့ပေမင့် လုပ်လက်စအလုပ်၊ ပြောလက်စ စကားသံကတော့ ဖုန်းသံကြောင့် သိပ်အဆက်ပြတ်မသွားတော့ဘူး
ဟုတ်ပါ့ တချို့ ring tone တွေကစိတ်ပျက်စရာပါ။ တခါက ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ နွေနေ့လည်ခင်းလူကလဲရှင်း ထိုင်ခုံခရီးသည် ခပ်ကြဲကြဲနဲ့ အားလုံးအတွေးကိုယ်စီနဲ့ ငိုက်တဲ့သူကငိုက်၊ စပယ်ယာလဲအေးရာအေးကြောင်း အဝေးကိုငေးရင်းစီးလာလိုက်တာ ရုတ်တရက် ငှက်အုပ်တအုပ်ကြောက်လန့်တကြားထပြန်သွားတဲ့အသံ ပွက်လောရိုက်ထွက်လာတာ ကားတစ်စီးလုံးအားလုံးအထိတ်တလန့်တွေဖြစ်ကုန်ပါရောလား။
sorrow နားကသူတော့ ဖုန်းအခါ၂၀လာရင် သီချင်း အပုဒ် ၂၀ နားထောင်ပြီး ဖြစ်မှာပေါ့။
Paing Lay လုပ်တာမျိုးဖြစ်သင့်တယ်လေ၊ တစ်ချို့က silent လုပ်ရမှန်းမသိကြတာလား မလုပ်ဖြစ်တာလား တွေ့ရပါ၏။
သိကြားမင်းလို နတ်မျက်စိမရှိကြတော့လည်း လူတိုင်း vibrate ဘဲ မထားကြဘူးပေါ့ဗျာ။ ဖုန်းမြည်သံထားတာကတော့ ထားသင့်ပါတယ် သင့်လျှော်ရာအသံကို ရွေးထားကြရင် ကောင်းမယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။
တစ်ခြား ring tone တွေတော့ ကြုံ ဘူးတယ်။ ကယ်ကြပါဦးရှင် တော့ မကြုံဘူးသေးဘူးဗျ
တော်သေး တာပေါ့ဗျ ကိုကြီးခင် စီး သွားတဲ့ ကားပေါ် ကခရီးသည် တွေ ဝိုင်းပြီး ဖုံး ပိုင်ရှင် ကို မကယ်လိုက် လို့
ကယ်ကြပါဦးရှင်လည်း တကယ်ရှိတယ် ကိုရင်မောင်ရေ မြန်မာringtone တွေစုထားတဲ့အပလီထဲမှာ
ဒီနိုင်ငံကျ.. အဲလိုဘေးလူအနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင် သိပ်လုပ်ကြတယ် မတွေ့ရဘူး..။
အိပ်နေတဲ့သူလန့်နိုးရင်. စိတ်တိုပြီး.. .သေနတ်နဲ့ထပစ်မလား..မသိ..။
ဒီမယ်ဦးခင်ခ ရှင်ဖုန်းကိုင်ရင်ကိုင်နော် မကိုင်ရင်ဘယ်လို —-ပြဿနာတွေတက်သွားမယ် ဆိုတာသိတယ်နော်…… ညွှတ်ညွှတ်ညွှတ်
ဟန်းဖုံးပေါထဲ ခုခေတ်ကြီးထဲမှာ လူတစ်ကိုယ် အကြိုက်တစ်မျိုးမို့ …
လူကြီးတွေမှာတောင် စံတော်ချိန်တီးလုံးတွေ၊ ငယ်ကျွမ်းဆွေတွေ၊ မြနန္ဒာတွေနဲ့ ရင်းတုန်းတွေကို စုံလို့ စုံလို့…….. ပြောလို့ ကုန်နိုင်ဖွယ်မရှိဘူး။
တာမီးရဲ့အဒေါ်ယောက်ျားဦးလေးလဲ အစည်းအဝေးတက်နေတုန်း ကိုကို့ဖုန်းလာနေတယ် ထမြည်လို့ သူ့မိန်းမကတောင် ပွစိ ပွစိ
ဖေဖေပြောတာကပိုရီရသေး ဘုန်းကြီးကျောင်းအလှူသွားတာ ဘုန်းကြီးတွေက ဖုန်းတွေ၊တက်ဘလက်တွေကိုယ်စီနဲ့တဲ့
ခနနေတော့ ကိုယ်တော်တစ်ပါးရဲ့ ဖုန်းကအသံမြည်လားတယ်။
“ဘုန်းဘုန်း ဖုံးလာနေတယ်ဘုရာ့ ဘုန်းဘုန်း ဖုံးလာနေတယ်ဘုရာ့ “ဆိုပဲ
မရင့်​ကျက်​တဲ့သူ​တွေမှာ ​တွေ့ရတတ်​တဲ့လက္ခဏာမျိုး​ပေါ့ ကိုခင်​ခ​ရေ
ကျုပ်​လဲ သူငယ်တန်း​လောက်​တုန်းက အဲသလိုပဲ က​လေးကလားစတန့်​ထွင်​တာမျိုး​တွေ လုပ်​ခဲ့ဖူးတာ​ပေါ့
အသံက . .
ဖေကြီးရေ မေကြီးခေါ်နေတယ် တုတ်ကောက်ခဲ့. . .တဲ့ဆိုတဲ့
သဂျီးတို့ဆီက ဒါဆိုသေနတ်ကျောက်လို့ မလုပ်ကျတာနေမှာပေါ့။
အဲ ရွာသားကြီးဖိုးထောင် ကျန်းခံသာလို့မာပါစ။
တစ်ခါတလေ တစ်ချို့ရင်းတုန်းတွေက နားထောင်လို့ကောင်သား မမ ရေ။
အာ့တွေချည့်စုထားတဲ့ အပလီကေးရှင်းကိုသက်သက်ရှိတာ ဟုတ်ပနန်းတော်ရာသူရေ ဟန်းဆက်ဝယ်ရင် ဆိုင်တွေကထဲ့ပေးလိုက်တာ အဲဒါနေမှာပေါ့။
မရင်ကျက်တယ်လို့လည်းပြောရသလို လက်တည့်စမ်းကြတာလဲနေမှာပေါ့ ဦးပါရေ။
တိမ်တမန်ရေ ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာအဲဒါပါ သင့်လျှော်ရာရင်းတုန်းထားစေချင်တာပါ။ မထားနဲ့မဆိုလိုပါ။
၁ ။ ပစ္စည်း အသစ်လေး ကိုင်ကာစ မို့ ။
၂ ။ ပိုင်ရှင် က မရင့်ကျက်သေးလို့ ။
၂ ချက်စလုံးကြောင့်သော် ၄င်း ၊
၁ ချက်ချက် ကြောင့်သော် ၄င်း ၊
ဖုန်းဆိုတာ တချိန်​က ​တော်​ရုံသ​ဌေး​တောင်​ကိုင်​ဖို့မလွယ်​တာကလား…
၁၉၈၉ ဝန်းကျင်​မှာ ဆယ်​လူလာဖုန်းတစ်​လုံးကို သိန်း ၄၀ ​ကျော်​ပါတယ်​။
အဲဒီတုန်းက ကား​ဈေးကို မှတ်​မိသ​လောက်​​ပြောရရင်​….
၈၇ ​မော်​ဒယ်​ ပါတ်​ဗလစ်​ကာ ၁က/ …. ၁၂ _ ၁၄ သိန်း
၈၆-၈၇ မော်ဒယ် ကိုရိုလာ (ဖင်ထောင်) ၁၅ – ၁၈ သိန်း
၉၂ မော်ဒယ် ကော်ရိုလာဗင် (အရပ်အခေါ် ဖင်ကောက် ) ၃၅ – ၃၈ သိန်း ……..
ဖုန်းဆိုတာ သန်း၆၀ မှာမှ အရပ်​သားအတွက်​ကိုင်​ခွင့်​ရှိတာ ​သောင်းဂဏန်းပါးပါးပါ ….
၂၀၀၁ခုနှစ်​ သုဝဏ မှာ ​ပေ၄၀ ​ပေ၆၀ လုံးချင်းတိုက်​တစ်​လုံးကို သိန်း ၁၂၀ မှာ ဆယ်​လူလာ ဖုန်းစာရွက်​စာတန်းစုံရင်​ ၅၅ သိန်း….(ကိုယ်​​တွေ့)
ကြိုးဖုန်း ၄၀ ဝန်းကျင် ….
ခြင်းဖုန်း cdma …. ၄၅ သိန်း..
ဖုန်းဆိုတာ သာမန်​ပြည်​သူအဖို့ ​ငေး​မောကြည့်​စရာ..
အခုလို အိမ်​တိုင်း​စေ့နီးပါးရလာကြတဲ့အခါ မထင်​တဲ့အိမ်​မက်​​တွေထဲ ခဏ​လောက်​​တော့​ပျော်​ကြပါ​စေ​လေ…
​တော်​​တော်​​လေး ချို့တဲ့ (အရာရာတိုင်း) လွန်းလို့ သနားစရာ​တောင်​​ကောင်းပါတယ်​ ။
၁၉၉၈ မှာေ၇ွှတစ်​ကျပ်​သားကို ၅ ​သောင်း ဝန်းကျင်​ဆို​တော့..
သဂျီးဆိုက်က ဘာဖြစ်သွားတာလဲ ကျနော့ ဒုတိယကော်မန့်မှာ
your comment is awaiting moderation လ်ျု့ပ်ါနေတယ်ဗျ
အမြဲတန်း အားလုံးကိုစစ်ဆေးပြီးမှ တင်ပေးပေါ့ဗျာ။
မြန်မာ ဖွန့် က နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ် မပြုသေးဘူးဗျ ။
အဲတော့ ၊ တခါတလေ တချို့ မြန်မာ စာလုံးအတွဲတွေကို ၊
သူကြီးရဲ့ Word Press က Anti Virus & Anti Spam software က ၊
Virus / Spam လို့ထင်ပြီး ကောက်ဖမ်းထားလိုက်တာဗျ ။
သူကြီး or Moderator တစ်ယောက်ယောက်က ၊
သတိထားမိရင် ၊ Approved ဆိုပြီး ပြန်လုပ်ပေးမှ ရတယ်ဗျ ။
တစ်ခါလည်း ကားပေါ်မှာ ဘေးက ထခေါ်တယ် မနောကလည်း အိပ်ငိုက်နေတုန်းဆိုတော့ အတော်လန့်သွားတယ်။ ဘုန်းကြီးတရားဟောတဲ့အသံ ကြားရတော့ ကိုယ်ကလည်း မနည်းကမန်းကတန်း မျက်လုံးဖွင့်ပြီး လက်အုပ်ပြေးချည်မိတယ်။ ဘေးက လူတွေ ၀ိုင်းရယ်မှ ရှက်လိုက်တာ မပြောပါနဲ့တော့။
အဘပြောတာ အဟုတ်ပါ စမ်းပင်စမ်းသော်ငြားလည်း တော်ရာလေးလုပ်ကြရင်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ။
MPT ဖုန်း ဈေးစစ်တမ်းတော့ ပြန်မပြောချင်ပါဘူးဗျာ။ အရင်အစိုးရလက်ထက်တွေတုန်းက ကျုပ်တို့ရှာသမျှ သူတို့ဆီကို မတန်မရာပေးရတာနဲ့တင် ဖိတ်တ၀က်စင်တ၀က်လေ။ ဖုန်း ဆိုလဲ ဈေးကြီးကြီး ယာဉ်ဆိုလည်း ဈေးကြီးကြီး အဲလို အဲလိုပေါ့ ကိုဆာမိရေ။
တရားဝင်ဈေး ၁၅သိန်းနဲ့ ရောင်းခဲ့တာ………..
အမ မမ ရေ မျက်နှာမပူတဲ့အပြင် ဂုဏ်တောင်ယူချင်ယူနေမှာလေ
တခါက စာမေးပွဲဖြေနေတုံး အနားက လူရဲ့ ဖုန်းက ထမြည်တာ ကြာနီကန် ဆရာတော် အသံနဲ့ နမောတဿ ဘဂ၀တော အရဟတော…. ဆိုတော့ ၀ိုင်းရယ်လိုက်ကြရတာ။
ဟီး..အနော်လည်း တစ်ခါသား ကားပေါ်မှာ ဝိုင်းကြည့်ခံရဖူးတယ်..
အနော့် ringtone က..
အဝေရာဟောန္တု.. အဗျာပဇ္ဇာဟောန္တု.. အနီဃာဟောန္တု..သုခိအတ္တာနံ..ပရိဟရန္တု..
ဆိုပြီး ထည့်ထားတာ.. ဟီး..
ခုတော့.. တူတူတူ.. တူတူတူ..တူတူတူ လောက်ပဲ လုပ်ထားတယ်..
ကျ နော် က တော့ မြ နဲ့ မောင် နဲ့ ခု မှ တွေ့ တာ ရင်းတုန်း က ၀ တ္တု တစ်ပုဒ် ရ သွား တာဘဲ ကို ခေ ရ